Fadeexaddii Ugu Weynayd Ee Lasoo Darista Qaranka Somaliland: Yaa Lahaa Amarka Lagaga Soo Baxay Dhahar, Yaase Dhabar Jebinta Ku Sameyey Ciid | maakhir.com
Fadeexaddii Ugu Weynayd Ee Lasoo Darista Qaranka Somaliland: Yaa Lahaa Amarka Lagaga Soo Baxay Dhahar, Yaase Dhabar Jebinta Ku Sameyey Ciid
Somaliland.Org — London, UK — 16 April, 2007
London (Somaliland.Org) Xogo Iyo Tafaasiil dheerad ah ayaa kasoo baxaya sababihii dhaliyey xilka qaadista Wasiirka Warfaafinta iyo isku daba wareegi iyo kala hadalkii xukuumadda Md Rayale. Sidoo kale waxa soo shaac baxay fadeexad baaxad weyn oo iftiiminaysa khilaaf iyo khiyaamo qaran, taasoo kaliftay fadeexadii ugu weynayd ee soo marta qaranka Somaliland tan iyo markii cagaha loo taagay sanadkii 1991.
Ilo xog ogaal ah oo dhuun daloola hawlaha ciidamadda qaranka iyo xukuumadda Somaliland oo xalay ilaa shalay shebekadda Somaliland.Org xidhiidho kala duwan dhex maray ayaa iftiiminaya dhacdooyin foolxun oo waxyeelo weyn u geestay qaranimadda Somaliland, taasoo ay masuuliyadeeda dusha uga ridayaan xukuumadda Madaxweyne Dahir Rayale Kaahiin.
Sagaalki bishan April ayaa waxa uu socdaalay gobolka Sanaag wefti Wasiiro iyo xildhibaano Somaliland isugu jira kuwaas oo ujeedadodu ahayd xog raadin iyo gogol xaadhis mashaaric hayaddaha deeqda bixiyaa ka fulinayeen gobolkaas oo ka mid ah deeqo iyo mashaaric la xidhiidha mashruuca JNA. Waftigaas waxa weerar gaadmo ah kusoo qaaday maleeshiyo beeledka Puntland. Iska cabin iyo dagaal culus oo dhex maray ciidanka qaranka Somaliland iyo maleeshiyadas kadib waxa laga adkaaday maleeshiyo beeleedkii dagaalka sooqaaday. Hase yeeshee, Xukuumadda Somaliiland ayaa iyada oo ciidanka Somaliland ku gacan sareeyey dagaalkii haddana amar ku bixisay in ciidanka qaranku kasoo baxo Dhahar oo dib ugu ruqaansado xerooyinkodi iyo Shimbiraale.
Tobankii April kadib markii ciidamadda iyo Wasiiradda Somaliland dib uga soo baxeen degaanka Dhahar ayaa waxa gebi ahaan gacan ku hayntii maamulka Dhahar la wareegay maamul goboleedka Puntland, kuwaas oo warbaahinta adduunka u sheegay in ay maamul u sameeyen degaanka Dhahar, ciidamadii Somaliland ka saaren degaanka.
Doodii Rayale iyo Waqaf:
Iyada oo waftdigii Wasiiradda iyo Xildhibaanadda Somaliland ku sugan yahay magaaladda Ceerigabo ayaa waxa xidhiidh dhinaca khadka telefonka ah dhex maray Madaxweyne Rayale iyo Wasiirka Gashandhiga Waqaf. Nuxurka xidhiidhkan iyo wada hadalka ayaa ah in ciidamaddu dib ugu laabtaan degaanka Dhahar iyo inay ku ekaadaan xeroyinkoda. Madaxweyne Rayale waxa uu ku doodayay in ciidamaddu aanay ku noqon Dhahar ee ku sugnaadan xerooyinkoda halka Wasiir Waqaf ku doodayay in fursad qaali ah lasoo gudbonatay qaranka Somaliland, awood ciidana haystan, sidaas darted ay ay tahay in ciidamaddu dib ugu noqdaan Dhahar. Madaxweyne Rayale marki in badan hadal la isku cel celiyey waxa uu Wasiirka gaashandiga la qaatay in ay dib ugu noqdaan Dhahar oo uu isagu go’aanka kama danbaysta ah qaato Wasiir ahaan oo yeelo waxii uu ka fursan waayo.
Waxa masuul sare oo ka tirsan xukuumadda Rayale tibaaxay in Md Rayale cadadis badan kaga imanayay dhinaca Ethiopia in ay ka baxaan degaanka Dhahar.
Puntland Oo Ka Baxday Dhahar
Markii arrin halkas marayay ayaa maleeshiyo beeledki Puntland ay habeenimadii 11.04.07 kala baxeen ciidamadodi gebi ahaan degaanka Dhahar. Isla Maalinimadii xigtay waxa uu Wasiirka Gaashandhigu ka kaxaystay magaaldda Ceerigaabo Guuto ka mid ah ciidamadda qaranka Somaliland, guutadaas oo isaga marki hore kasii raacday magaaladda Hargeysa. Wasiirka oo guutadaas wata ayaa u ruqaansaday dhinaca degaanka Dhahar. Habeenimadii 12.04.07 ayaa waxa degaanka Dhahar galay Wasiirka Gashandiga Somaliland, Wasiirka Isbortiga iyo Ciyaraha Somaliland oo kaso jeeda deganka Dhahar iyo ciidankii ay wateen.
Shirar iyo kulamo kala duwan ayaa 13.04.07 ka bilowday magaaladda Dhahar kuwaas oo dhex marayay waftiga Wasiiradda Somaliland iyo odayaasha iyo cuqaasha degaanka oo si fiican usoo dhoweyey wefdiga Somaliland. Hase yeeshee markay taarikhdu ahayd 14.04.07 ayaa waxa weerar gaadmo ah sadex dhinac kaga soo qaaday ciidanka Somaliland maleeshiyo beeledka Puntland. Ciidanka Somaliland si wanaagsan ayuu isaga caabiyey ciidankas iyo weerarkas, waanu ka gacan sareeyay maleeshiyadii soo weerartay. Nasiib darro’se waxay dhacday in ciidankii Soomaliland ee dagaalku ku qabsaday Dhahar kadib markii ay gurmadka ka dalbadeen ciidanki SL ee fadhiyey Ceerigabo ay heli waayan gurmadkii ay dalbadeem. Tasina waxa ay kalliftay in Wasiiraddii Somaliland iyo ciidankodiba dib uga soo baxaan magaaladda Dhahar halkaasna maamul beeledka Puntland kula wareego gacan ku haynta Dhahar.
Isla wakhtiga ciidanka Somaliland lagu amrayo inay ka baxaan Dhahar waxa ciidamadda Somaliland u jireen magaaladda Boosaso wax ka yar 60km. Dhinaca kale waxa ciidamadda Somaliland u jireen xadka Somaliland iyo Somaliya wax ka yar 20km.
Haddaba waxa xusid mudan in fursadii ugu fiicnaynd ee Somaliland xuduudaheda ku sugi lahayd ay xukuumadda Madaxweyne Rayale fashilisay. Waxa xusid mudan in qarankii Somaliland noqday wax lagu qoslo oo u ekaado in maleeshiyo beeleed ka guulaysatay. Waxaa suaashu tahay waxyeelo intee le’eg iyo saameyn intee le’eg ayay ku yeelan doonta dhabar jebintani qaramimada Somaliland.
Ugu danbeyntii, Madaxweyne Rayale waxa uu xilki Wasirnimo ka qaaday Wasiirka Gashandhiga. Waxa yadu is weydiin mudan Yaa la xisaabtami kara Oo Madaxweyne Rayale isna xil ka xayuubin ku sameyn kara?
© Somaliland.Org Newsdesk
« Wasiirka Gaashaandhigga Somaliland oo xilka laga qaaday
Is “Somaliland” Whistling Past the Graveyard? -Ali A. Fatah »